TV-ga ugu dambeyn
Qalabka quruxda badan ayaa kuu ogolaanaya inaad daawato filimaad cusub iyo TV la'aan bilaash ah bishiiba?
Iyadoo TV-ga Ultimate hadda iibka adduunka, tani waa xal aad u fiican oo lagu daawado filimaanta aad jeceshahay iyo muujinta bilaash!
Dhamaanteen waan ognahay sida biilasha qarashka badan ee qashinka ah iyo adeegga rukunka ah.
Waxaad bixisaa khadka telefoonka, Netflix, filimaanta iyo isboortiska marka loo baahdo ... waxay kordhisaa.
Dabcan waxaa jira qalabkan oo dhan. Qalab-qaadahaaga, AppleTV ama Qoryaha, DVD-yada iyo inta badan TV-yada qaaliga ah.
Sidaa daraadeed ma ahan mid la yaab leh in dad badani ay raadinayaan raqiis, xalal fudud oo lagu yareeyo biilasha kabaha iyo in laga takhaluso dhammaan qalabka.
ka takhalusi cable
Nasiib wanaag, waxaa jira xal aad si sharci ah u daawan karto wax bilaash ah!
Shirkad Maraykan ah oo saldhiggeedu yahay ayaa soo saartay qalab casri ah oo jaban oo beddelaya sida dadku u isticmaalaan warbaahinta.
Waxaa loo yaqaan ' Ultimate TV' . Waa aaladda casriga ee ugu fiicnaanta guriga oo si fudud loogu xirriiri karo TV kasta. Waxay la timaadaa wax kasta oo hore loo rakibay waana kor u kacaya daqiiqado gudahood. Ma jiro farsamo yaqaan oo loo baahan yahay.
Waa xarun madadaalo ah oo isku xidhan oo kuu ogolaaneysa inaad ka takhalusto dhamaan qalabkaaga iyo qalabka kale. Dhamaan barnaamijyadeena aan ognahay waa kuwo horay loo xiray sida aad uga ogaan karto waxyaabaha sida AppleTV, Amazon Firestick iwm. Laakiin waxaa jira farqi weyn - waxay kuu ogolaaneysaa inaad daawato wax bilaash ah. Iyadoo aan lahayn liis garayn iyo gabi ahaanba sharciga ah.
qalabka ugu fiican ee loo adeegsado si loo bedelo fiilooyinka
Sidee Ayuu U Shaqeeyaa?
Way fududahay! Kaliya TV-ga ugu dambeyn oo leh TV kasta oo aad leedahay. Dhamaan fiilooyinka ayaa ku jira xirmada. Riix batoonka korontada oo la sameeyo. Maqnaansho, macnaheedu waa qaadashada 10 ilbiriqsi waxaadna awoodaa inaad daawato wax kasta oo aad rabto.
Telefishin kama dambaysta ah ayaa si buuxda dib loogu soo celiyay oo dib loo cusboonaysiiyay si ay u shaqeyso xitaa sahlan. Tiknooloojiyada TV-ga waa raadineysaa internetka halkaasoo ay ku heli doonto oo socodsiin doonto, sida muuqata barnaamijka tv-ga, hollywood-ka, ama dhacdo isboorti oo aad rabto inaad daawato adiga oo aan ka walwalin bixinta kharashka kirada ama liis-koobka bisha.
"Qalabkani wuxuu igu badbaadiyey lacag ah tufaax!"
Waxaad xitaa jogi kartaa telefishanka nool 24/7 oo ay ku jiraan dhamaanba jidka aad ka heshay shirkadda telefanka ee xaafaddaada iyo boqolaal ka mid ah adduunka oo idil. Wax kasta oo ah Ultra HD dabcan.
Maxaa u muuqda in ay wanaagsan tahay in ay noqoto runta dhabta ah, wax xadhig ah kuma xirna. Dabcan waxaad u baahan tahay in aad internetka hesho waana lacag yar oo bil ah bishiiba. Laakiin miyaadan haysanin? Iyo waqtiyo ku-meel-gaar ah iyo waqtiyada dayactirka. Telefishin dhammaystiran si toos ah ayay u dhigtaa xawaaraha internetka si nooc kasta oo ka mid ah content loo daawan karo isla markiiba. Haddii Youtube u shaqeyso Ultimate TV sidoo kale wuu shaqeyn doonaa.
Iyadoo TV-ga Ultimate waxaad heli doontaa nabadgelyo maskaxeed, inaad ogtahay inaad daawan kartid bandhigyada aad jeceshahay.
Laakiin ma sharci baa?
HAA! Dhab ahaan. Sharci ahaan waa sharci inaad isticmaasho maadama aadan kaydin mawduuca oo kaliya. Taasi waa wax weyn oo ku saabsan.
Dabcan shirkadaha telefishanku kuma faraxsanyihiin xaaladda, sidaa darteed waxay isku dayayaan in ay joojiyaan TV-yada Ultimate inay iibiyaan shacabka. Sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa inay si dhakhso ah kuugu soo laabato, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad haysato waa mid gebi ahaanba aad u fiican oo awoodi doona inaad daawato wax walba oo bilaash ah oo bilaash ah - oo gabi ahaanba sharci ah.
Intee in le'eg ayey igu dhacaysaa in ay igu kiciso?
Waxaad u maleyneysaa in qalabkani uu aad u qaali yahay ... Been! Telefishin dhamaystiran ayaa raadineysa iibsasho 1 helitaanka 1 BILAASH AH Hal mar lacag bixinta - ma jirto liis la'aan, qarashka bil kasta. Iska hubi!
Waxaad si toos ah uga soo iibsan kartaa boggaga shirkadda adigoo gujinaya halkan .
FIIRO GAAR AH: Maaddaama uu jiro dalab aad u sarreeya, dadku hadda waxay iibsanayaan dhowr qalab markii ay rabaan inay iibiyaan qiimo sare kadib. Fadlan u ogolow 1-2 wiig in maraakiibta.
Telefishanka ugu fiican waxaa loo isticmaali karaa waddan kasta oo adduunka ah.
Ka bilow inaad wax daawato wax bilaash ah ...
Hadda oo laguu wargaliyay khudbaddan quruxda badan, aan kuu sheego sida ay u fududahay in la sameeyo. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad raacdo seddexda tallaabood:
daawo tv-ga lacag la'aanta ah
Talaabada 1aad: Ku amraya TV-yada ugu dambeysa si aad uga faa'iidaysato 40% iibka.
Talaabada 2aad: Marka aad hesho, fur furka oo ku xir xayeysiin kasta oo aad jeceshahay fiilooyinka ku jira iyo riix batoonka korontada. TV-ga ugu dambeeyaa wuxuu kaa codsanayaa furaha wi-fi. Ku rid oo aad diyaar u tahay inaad tagto.
Talaabada 3aad: U fiirso wax bilaash ah ... Telefishin dhamaystiran waxay si toos ah u muujin doontaa bandhigyada aad jeceshahay ama caanka ah, mar walbana waxaad raadin kartaa wax kasta oo isla markiiba fiiri.
Halkani waa calaamad: TV-ga ugu dambayn waa hadiyad weyn, maxaa yeelay waxay badbaadin doontaa qof walba, kaas oo u qaata, lacag ah tin!
Maadaama dad badani ay soo iibsadaan qalabyo badan hal mar si ay dib ugu soo celiyaan! Sidaas darteed fadlan u ogolow 1-2 usbuuc in maraakiibta. "